Oppo dia manambara ny andiany Reno sy ny findainy vaovao amin'ny volana aprily | Androidsis
Oppo Reno, ny finday avo lenta manaraka miaraka amin'ny Snapdragon 855 izay nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana aprily
Ora vitsy lasa izay, nanambara ny filoha lefitry ny Oppo Brian Shen a andian-telefaona Oppo vaovao, ary antsoina hoe 'Reno'. Nambara ihany koa ny sary famantarana an'ity fianakaviana manaraka ity, izay mampiasa loko marevaka, milaza fa mety ho tanora mpihaino no kendrena.
Ankoatr'izay, naneho an'io ihany koa ilay mpanamboatra smartphone any Shina ny smartphone voalohany amin'ity andiany ity dia ny Oppo Reno. Antsipiriany misimisy etsy ambany.
Ny mpanatanteraka, tamin'ny fanambaràny, dia nampita izany ny terminal avo lenta dia havoaka amin'ny 10 aprily any Shina. Tsy misy fampahalalana mifandraika amin'ity fanavaozana finday avo lenta ity azo alaina ankehitriny, fa mety ilay finday miaraka amin'ny teknolojia zoom optika 10X tsy misy fatiantoka, tsara ny orinasa dia antenaina handefa terminal miaraka amin'ity zava-baovao ity amin'ny volana manaraka.
Fanambarana andiany Reno
Talohan'izay dia nanambara ny orinasa fa ny smartphone dia haseho amin'ny volana aprily dia hampandehanin'ny processeur farany sy matanjaka indrindra an'i Qualcomm hatreto: ny Snapdragon 855 valon fototra 7nm.
Etsy ankilany, Shen Yiren koa dia nanamafy izany ny fitaovana dia ampandehanin'ny bateria mahazaka 4,065 mAh. Na dia mbola tsy nanonona na inona na inona momba ny fanohanana famahanana haingana aza ianao dia antenainay fa ny finday avo lenta dia manana teknolojia famahanana haingana haingana an'ny orinasa.
Ny orinasa dia nanambara ihany koa fa hanana izany singa iray tapitrisa mahery ao amin'ity tahiry ity amin'ny famoahana farany. Ankoatr'izay, nanampy izy fa hiezaka ny hitazona ny kapila finday 3,5mm amin'ny findainy finday, zavatra mbola itodihan'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Na izany aza, mbola tokony ho jerena raha hitazona ity famaritana ara-teknika ity ilay fitaovana, izay tsy azo antoka ary mamela ny maro hiandry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Oppo Reno, ny finday avo lenta manaraka miaraka amin'ny Snapdragon 855 izay nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana aprily
Fiarovana Android: Ny momba ny alalana amin'ny fampiharana rehetra, ny hanome sa tsia?